सीमित कम्पनी: यो के हो, विशेषताहरू, सुविधाहरू र यसलाई कसरी सिर्जना गर्ने | अर्थव्यवस्था वित्त
स्पेनमा कम्पनी बनाउने क्रममा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने कानुनी रूपहरू, कुनै श without्का बिना, सार्वजनिक सीमित कम्पनी हो। यसले कम्पनीलाई पर्याप्त स्रोतहरू मात्र मद्दत गर्दैन, तर लगानी जोखिमहरूलाई पनि कम गर्न सकिन्छ।
तर, निगम भनेको के हो? उनीहरूका विशेषताहरू के हुन्? यो कसरी गठन गर्न सकिन्छ? यदि तपाइँ यस विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई यसलाई थोरै राम्ररी जान्न मद्दत गर्दछौं।
1 सीमित कम्पनी के हो?
1.1 निगम को विशेषताहरु
2 SA का फाइदा र नोक्सानहरू
2.1 एक प्रतिस्पर्धी लाभ
2.2 विस्तार गर्न सकिन्छ
2.3 वित्त को नयाँ स्रोतहरु प्राप्त गरीन्छ
2.4 गलत निर्णयहरू गरिन्छन्
2.5 सबै इक्विटी साझेदारहरू भाग लिन यो गाह्रो हुन सक्छ
3 सीमित कम्पनी कसरी सम्मिलित गर्ने
सीमित कम्पनी के हो?
एक कर्पोरेसन, जसलाई यसको संक्षिप्त रूपमा, SA द्वारा चिनिन्छ, वा कर्पोरेसनको रूपमा पनि चिनिन्छ, एक वाणिज्यिक कम्पनी हो जहाँ साझेदारहरूले उनीहरूले योगदान पुर्‍याएका पूँजीको लागि सीमित दायित्व हुन्छ। भन्नुपर्दा, प्रत्येकले पूँजीको अंशका लागि जिम्मेवार हुन्छन् जुन उनीहरूले लगानी गरेका थिए, कुलको लागि होइन।
विशेष गरी, यो पान-हिस्पैनिक शब्दकोश कानूनी स्पेनिश को निगम परिभाषित गर्दछ जस्तै:
"क्यापिटल मर्चेन्टल कम्पनी, जसमा यसलाई सेयर भनिने एल्कोट्समा विभाजित गरिएको छ र जसमा साझेदारहरू व्यक्तिगत कर्पोरेट debtsणका लागि जिम्मेवार हुँदैनन्।"
निगम को विशेषताहरु
यसको अवधारणाबाट हामी एक श्रृंखला चयन गर्न सक्छौं कर्पोरेसन परिभाषित विशेषताहरू। यी हुन्:
यसको पूंजी सेयरमा विभाजित छ। प्रत्येक पार्टनरले क्यापिटल x योगदान गर्दछ, जुन त्यो कम्पनी वा कम्पनीको सेयरमा रूपान्तरण हुन्छ। तसर्थ, साझेदारहरू शेयरधारक बन्न समाप्त हुन्छन् र तिनीहरूसँग साझेदारीको आधारमा भाग लिन्छन्। अर्को शब्दमा, जो कोहीले अधिक योगदान गर्दछ अधिक सेयरहरू छन्। बदलेमा यो स्वतन्त्र रूपमा बेच्न सकिन्छ, यदि धारकले त्यसो गर्ने निर्णय भएको छ भने।
पूंजीमा सीमित दायित्व छ। किनभने प्रत्येक सेयरधारकले पूंजीको एक अंश राख्छ, हामी फेला पार्दछौं कि तेस्रो पक्षहरूमा तिनीहरूको दायित्व असीमित छैन तर ती शेयरहरूको मूल्यमा आधारित छ।
सेयर होल्डरहरूले आफैलाई चिनोस्न पर्दैन। एक सार्वजनिक सीमित कम्पनीको रूपमा, सेयर होल्डरहरू, यद्यपि तिनीहरू कम्पनीमा लिंक छन्, उनीहरूको सार्वजनिक सार्वजनिक गर्नुपर्दैन। अर्को शब्दहरुमा, तिनीहरुले अफिस लिन वा समाजको लागी काम गर्नुपर्दैन। तिनीहरू पूँजीवादी साझेदार वा पूंजीवादी शेयरधारक मानिन्छन्।
एक कर्पोरेसन कर्पोरेट कर मार्फत कर छ र यसका अतिरिक्त उनीहरूको कानुनी व्यक्तित्व छ।
अनिवार्य अंगहरू छन्। विशेष रूपमा तपाईसँग हुनुपर्दछ:
एक साधारण सेयर होल्डरहरूको बैठक: जहाँ शेयरधारकहरूसँग बैठक बोलाइन्छ कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनका बारे छलफल गर्न।
कम्पनी प्रशासकहरू: कम्पनी टीम गठन गर्न। यी सँधै सामान्य सेयरहोल्डरहरूको बैठकमा छनौट हुन्छन्।
सुपरवाइजरी काउन्सिल: यो वैकल्पिक हो र यो सुनिश्चित गर्नको लागि जिम्मेवार छ कि प्रशासकहरूले उनीहरूको काम पर्याप्त मात्रामा पूरा गर्छन्।
SA का फाइदा र नोक्सानहरू
यद्यपि सार्वजनिक सीमित कम्पनीलाई केहि केसहरूको लागि अत्यन्त उपयुक्त ब्यापार फिगरको रूपमा देख्न सकिन्छ, र यसले धेरै फाइदाहरू ल्याउँछ भन्नेमा कुनै श .्का छैन, यसका केही बेफाइदाहरू पनि छन् जुन ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
यसको लागि फाइदा, यी धेरै परिभाषित छन्, र ती हुन्:
एक प्रतिस्पर्धी लाभ
वास्तवमा भन्ने हो भने, व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गरेर तपाईले यसलाई अझ ठोस बनाउनु भएको हो। थप रूपमा, पूँजीवादी साझेदारहरूसँग, जससँग कार्यात्मक जिम्मेवारी वा कम्पनीको सञ्चालनमा भाग लिनु पर्दैन, प्रबन्धन गर्दा अधिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।
र त्यो कम्पनीले गर्न सक्दछ धेरै व्यक्तिको पूंजी योगदान तर जो व्यापारको प्रगतिमा असर गर्दैन, बैठक बाहिर।
विस्तार गर्न सकिन्छ
सीमित कम्पनीले तपाईंलाई विस्तार गर्न संभावनाहरू बढाउन अनुमति दिन्छ। र, यस अवस्थामा, पूँजी योगदान गर्नको लागि कुनै पनि न्यूनतम वा अधिकतम साझेदारहरू छैनन्।
वित्त को नयाँ स्रोतहरु प्राप्त गरीन्छ
तथ्य यो छ कि शेयर पूंजी खण्डित हुन सक्छ र प्रत्येक पार्टनरले रकम योगदान गर्दछ कि वित्तिय को नयाँ स्रोतहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी अनुमति दिन्छ र, नयाँ लगानीकर्ताहरू, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा, व्यापारको विस्तार बढाउनेछन् र यसका सम्भावनाहरू।
अब, को मामला मा एक कर्पोरेसन को नुकसान, त्यहाँ विचार गर्न को लागी धेरै छन्:
गलत निर्णयहरू गरिन्छन्
यो सधैं हुन्छ नै हुँदैन, तर त्यहाँ यस्तो हुने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने साझेदारहरू आफैं हुन्, यद्यपि उनीहरूसँग कम्पनीमा व्यवस्थापन पदहरू छैनन्। तिनीहरूसँग सबै शक्ति छ। उनीहरूले मतदान, सहभागिता र निर्णय अधिकारहरू कायम राख्छन्, जसले उनीहरूले कम्पनीको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्दछन् भन्ने लाग्छ कि उनीहरूले त्यो व्यवसायको कुनै पनि पक्षमा हस्तक्षेप गर्छन्।
र समस्या यो हो कि तिनीहरूको अख्तियार सदस्यहरूको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसले कम्पनी चलाउँछन् र व्यवस्थापन गर्छन्।
सबै इक्विटी साझेदारहरू भाग लिन यो गाह्रो हुन सक्छ
विशेष गरी बैठकहरूमा जहाँ व्यवसायको प्रगतिको बारेमा छलफल गर्नुपर्दछ। जब त्यहाँ धेरै पूंजीवादी साझेदारहरू हुन्छन् र ती सबैलाई भेट्नु आवश्यक हुन्छ, तपाईंले भेट्न सक्नुहुन्छ कि धेरै जना अपोइन्टमेन्टमा उपस्थित हुँदैनन्।
यो सञ्चार च्यानलमा बाधा पुर्‍याउँछ वा यो अन्तमा यो समाप्त हुन्छ कि तिनीहरू समाजको थकित हुन्छन् यदि तिनीहरू लाभहरू देख्दैनन्।
सीमित कम्पनी कसरी सम्मिलित गर्ने
अब जब तपाइँलाई थाहा छ कि सीमित कम्पनी के हो र यसको गुणहरू साथै यसको दोषहरू, के तपाइँ SA लाई सेट अप गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने पहिलो कुरा यो हो कि यस द्वारा शासित छ ठूला कम्पनीहरू कानून (शाही विधायकीय डिक्री १/२०१०), जसले क्यापिटल कम्पनी ऐनको संशोधित पाठलाई अनुमोदन गर्दछ), जुन जहाँ पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू भनिएको छ। ती मध्ये, एउटा सार्वजनिक कामको माध्यमबाट गरिन्छ भन्ने तथ्य पनि छ, साथै मर्कन्टाइल रजिस्ट्रीमा नाम वा कम्पनीको नाम दर्ता गर्दा यसलाई पछि बेनामी (SA) भनेर चिनाउने आद्याक्षरहरू हुन्छ।
La निगमनका लेखहरू यसले निम्न डाटा समावेश गर्नुपर्दछ:
कम्पनी नाम वा अनुदानकर्ताहरूको पूरा डाटा, तिनीहरू क्रमशः कानूनी व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्ति हुन् कि छैनन्।
एक कथन जुन यो स्थापित छ कि अनुदानदाताहरु को एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी बनाउन को लागी छ।
यसले संविधानको खर्च कति हुनेछ भन्ने कुराको स्थापना गर्दछ।
कर्पोरेसनको Bylaws। यी सबै अनुदानदाताहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ।
प्रशासकहरूको डेटा, चाहे तिनीहरू प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिहरू हुन्।
साथै, तपाइँसँग पनि छ न्यूनतम शेयर पूंजी प्रदान गरिएको छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्। यो ,60000०,००० यूरो हो, दर्ता गरिएको सेयरमा विभाजित छ जुन प्रत्येक पार्टनरले कम्पनीमा लगानी गरिरहेका पूंजीको समानुपातिक हुनेछ। सबै पूंजी मध्ये, जब यो गठन हुन्छ, यसको २%% योगदान हुनुपर्दछ, र यसलाई बाँकी रकम प्रविष्ट गर्न सहमत हुनुपर्दछ।
अब जब तपाइँ कर्पोरेसनको बारेमा बढी जान्नुहुन्छ, के यो तपाईंलाई आवश्यक कानुनी इकाई हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » बेनामी समाज